Internet Explorer ma soo bandhigi karo bogga shabakadda: maxaa la sameeyaa? | Forum Mobile
Internet Explorer ma soo bandhigi karo bogga shabakadda: maxaa la sameeyaa?
Internet Explorer waa browser Kaas oo si dirqi ah ku leh suuqa. Inkasta oo weli loo isticmaalo qalabkii hore, dad badan ayaa sii wada isticmaalka si ay u dhex maraan. In kasta oo tani ay tahay wax dhibaato keeni kara, maadaama aysan ahayn wax aan caadi ahayn in lagu kulmo farriinta ah in Internet Explorer aanu soo bandhigi karin bogga shabakadda.
Tani waa dhibaato dhib badan taasi waxay kaa ilaalinaysaa inaad waayo-aragnimada daalacashada wanaagsan yeelato. Intaa waxaa dheer, isticmaaleyaal badan ma garanayaan waxa ay tahay inay sameeyaan waqtiga digniintan ay ka soo muuqato shaashadda. Sidaa darteed, hoos ayaan kuugu sheegi doonaa wax badan. Waxaanu kuu daynay xalal aad isku daydo marka aanu hayno ogaysiis ah in Internet Explorer aanu soo bandhigi karin bogga shabakadda.
Asalka fariintan waa kala duwanaan kartaa, taas oo ah. Waxaa jira dhowr sababood oo ay uga soo muuqan karto shaashadda PC wakhtigaas. Warka fiicani waa in aanu haysano xalal dhowr ah oo aan isku dayi karno arrintan. Si aan uga dhigno in shabakada mar kale lagu soo bandhigo browserka si caadi ah. In kasta oo ay tahay in aan maskaxda ku hayno in ay tahay biraawsar duug ah, sidaas darteed had iyo jeer si fiican uma shaqeyn doono.
Dhinaca kale, waxaa muhiim ah in la ogaado in browser ah waxa dhici doonta in taageero la’aani ay ka dhammaan doonto dhawaan. Internet Explorer 11 arjiga desktop-ka ayaa shaqada ka fariisan doona wuxuuna ka maqnaan doonaa taageerada Juun 15, 2022, sida ay xaqiijisay Microsoft lafteeda. Markaa ugu dhakhsaha badan browser-kan ma awoodi doono in si raaxo leh loogu isticmaalo waxaana laga yaabaa in aanu la kulano dhibaatooyin badan oo la jaan qaada marka la isticmaalayo.
1 Xiriirka khadka internetka
2 qalad bogga
3 Nadiifi taariikhda wax raadinta
4 Hubi wakiilka iyo goobaha DNS
5 Dib u deji Dejinta Internet Explorer
Xiriirka khadka internetka
Mid ka mid ah hubinta ugu horreysa ee arrintan la xiriirta waa in la eego haddii xidhiidhkaaga internetku yahay sababta sababta aadan u geli karin shabakadaas. Waxaa laga yaabaa inay dhacdo in xiriirkeena uu fashilmay. Haddii ay tani dhacdo, markaa ma geli karno bogga shabakadda, browserka ayaa laga yaabaa inuu marka hore naga tago digniintan oo haddii aan isku dayno inaan dib u cusbooneysiino waxay naga tagi doontaa ogeysiis ah inuusan jirin wax xiriir ah oo internetka ah waqtigaas. Tani waa wax dhici kara xaalado badan.
Waxaan isku dayi karnaa inaan furno bog kale ama isticmaal browser kale ama app u baahan isku xirka internetka waqtigaas. Sababtoo ah haddii xulashooyinkan kale midkoodna shaqeyn waayaan, markaa waxaan go'aamin karnaa in ay tahay isku xirka internetka ee dhibaatada ah, sababta boggan shabakadu uusan u dhicin ama aan loo soo bandhigin. Maxaan sameyn karnaa haddii xiriirku hadda xumaado?
Ku celi modem-ka: Waxa ugu wanagsan ee aanu wakhtigaas samayn karno waa in aanu guriga ka damino modem-ka, sugno dhawr ilbiriqsi ka dib waxaanu dib u shid karnaa. Marar badan dib u bilaabida isku xirka WiFi ee guriga waxay caawisaa xalinta dhibaatooyinka noocaan ah.
Ku xidh oo ka saar shabakada kombayutarka: Waxa kale oo ay dhici kartaa in ay tahay fashil ku meel gaar ah ee PC. Sidaa darteed, ka saar PC-gaaga shabakadaas oo dhowr ilbiriqsi ka dib, ku xidh mar kale. Tani waxay sidoo kale kaa caawin kartaa xaaladahan.
Sababta kale ee aan u helno fariinta ah in Internet Explorer uusan soo bandhigi karin bogga shabakadda waxay noqon kartaa qalad ka yimid mareegaha laftiisa. Waxaa laga yaabaa in dhibaato ay ka timaado mareegahan ama server-kiisa, kuwaas oo naga hor istaagaya in aan galno. Maaha wax aan caadi ahayn in server-yada mareegaha qaarkood ay hoos u dhacaan ama ay dhibaato la kulmaan waqti cayiman. Haddii tani dhacdo, ma awoodno inaan galno. Markaa maaha wax aanu ku xakamayn karno kiiskan.
Sidaa darteed, waan isku dayi karnaa ku fur boggan shabakada browserka ama qalab kale. Tan iyo markaas waxaan awood u yeelan doonnaa inaan aragno inay si fiican u shaqeyso iyo in kale. Taasi waa, haddii aysan wali suurtagal ahayn in la galo shabakadan aaladaha kale ama browser kale, markaa waxaan mar hore go'aamin karnaa in ay khalad tahay bogga internetka ee su'aasha. Markaa waxba ma samayn karno, laakiin laga bilaabo boggan shabakadda waa inay xalliyaan dhibaatadan si dadka isticmaala ay mar kale u galaan.
Nadiifi taariikhda wax raadinta
Wax inta badan lagula taliyaa dhibaatooyinka noocaan ah ee Internet Explorer waa taariikh daalacashada cad. Xaalado badan waxay la xidhiidha cache, cookies ama xogta la ururiyey ee shabakada internetka ee browserka laftiisa. Sidaa darteed, haddii macluumaadkan la tirtiro, waxaa laga yaabaa inaan marin u helno mareegta la sheegay mar kale, si fariintan ay u joojiso inay ka soo muuqato shaashadda. Waa shay sida caadiga ah u shaqeeya marar badan, markaa waxaa habboon in la tijaabiyo. Haddii aad rabto inaad tan samayso, tillaabooyinka aad raacayso waa:
Internet Explorer ka fur kumbuyuutarkaaga.
Saxaafadda Alt si ay u muujiyaan bar menu.
Liiska Qalabka, dhagsii ikhtiyaarka Xulashada Internetka (Doorashada Internetka).
Taariikhda Browsing, riix ikhtiyaarka tirtirka.
Dooro dhammaan sanduuqyada aad rabto inaad ku saxdo kiiskan ka dibna riix ikhtiyaarka Delete.
Jooji browserka oo dib u bilow Internet Explorer.
Isku day inaad mar kale geliso mareegahaas.
Haddii dhibaatadu ahayd cookies-kaas ama xogta lagu ururiyey Internet Explorer, markaas waxaan geli karnaa mar kale shabakadda. Tani waa xal si fiican u shaqeeya xaaladda noocan oo kale ah, marka waxaa laga yaabaa in ay mudan tahay in la isku dayo. Intaa waxaa dheer, waa wax aan sameyn karno iyada oo aan loo eegin nooca browserka ee aan ku hayno kombiyuutarka. Markaa dhammaan isticmaalayaashu waxay awood u yeelan doonaan inay tan ku sameeyaan xaaladdooda.
Hubi wakiilka iyo goobaha DNS
Dejinta wakiillada waxa loo adeegsadaa in loogu sheego Internet Explorer ciwaanka shabakadda ee serfarka dhexdhexaadka ah, kaas oo loo isticmaalo inta u dhaxaysa browserka iyo internetka. Sida caadiga ah, Internet Explorer wuxuu si toos ah u ogaanayaa goobaha wakiillada. Inkasta oo laga yaabo inay dhacdo in qaabayntan la bedelay ka dibna dhibaatooyinkan isku xirka ayaa ka soo baxa kombuyuutarkeena. Tani waxay noqon kartaa sababta aynaan u geli karin bogga internetka ee la sheegay.
Dareenkan, waa inaan xaqiijinaa Internet Explorer si toos ah u ogow goobaha wakiilnimada. Sababtoo ah haddii ay sidaas tahay, wax walba waa fiican yihiin. Laakiin haddii aysan si toos ah u ogaan, markaas dhibaato ayaa naga haysata browserka. Talaabooyinka la raacayo kiiskan waa:
Sanduuqa raadinta ee ku yaal goobta shaqada ee PC-gaaga, ku qor "Internet Options"
Dooro ikhtiyaarka leh magacaas, kaas oo iska leh guddiga kantaroolka ee kombiyuutarka.
Tag tab Connections
Taabo LAN Settings.
Tag ikhtiyaarka Si toos ah u ogow dejinta
Hubi in ay jirto gujin ku xiga doorashadan.
Haddii aysan jirin, hubi doorashadan si aad u hesho gujinkaas.
Guji OK oo ka bax qaybtan.
Dib u deji Dejinta Internet Explorer
Dhibaatada waxaa sababi kara goobaha browserka. Haddii qaabeyntan la beddelo, waxaa laga yaabaa inay isbeddel ku yimaaddo hawlgalka browser-kan ee PC-ga, markaa tani waxay noqon kartaa sababta aynaan geli karin bogga shabakadda. Sidaa darteed, waxaan qaadan karnaa go'aanka dib u deji Internet Explorer si aad u dejiso dejinta caadiga ah waxaana rajeynayaa in tani ay ka shaqeyn doonto sidii loo hagaajin lahaa dhibaatada. Talaabooyinka la raacayo si tan loo sameeyo waa:
Guji liiska Qalabka ee browserka.
Ka raadi ikhtiyaarka ikhtiyaarka internetka ee liiskaas.
Guji tabka Advanced Options.
Guji ikhtiyaarka Dib-u-dejinta.
Sanduuqa ka baxa Internet Explorer Default Settings, guji Dib u deji.
Mar kale xaqiiji falkan.
Sanduuqa soo socda, guji ikhtiyaarka Xir.
Dib uga bilow Internet Explorer kombayutarkaga
Xaalado badan tani way shaqayn doontaa. Marka aad dib u bilowdo browserka, isku day mar kale gelitaanka boggan. Waxay u badan tahay, in Internet Explorer uusan soo bandhigi karin bogga shabakadu ay joojin doonto soo bixista waxaadna awoodi doontaa inaad si caadi ah u gasho bogga shabakadda. Haddaba mushkiladda waxaa lagu xalliyay habkan oo waxay dhibaato ku ahayd habaynta hadda ee browserka laftiisa.
Mid ka mid ah jeeggii ugu dambeeyay ee arrintan la xiriira waa antivirus-ka aad ku leedahay kombiyuutarkaaga. Waxa laga yaabaa in wakhtigaas ay faragelin ku hayso hawlaha Internet Explorer, taas oo macnaheedu yahay in ay xannibayso gelitaanka boggaga internetka qaarkood ama ay sababto browserka guud ahaan in uu xumaado. Tani waa wax aan ku hubin karno qaybta Qari dhammaan adeegyada Microsoft gudaha qaabeynta nidaamka. Wax walba waa in meeshaas laga damiyo ka dibna waxaan dib u bilaabi karnaa kumbuyuutarka iyo browserka.
Waa inaad ka ilaalisaa barnaamijyada kale inay galaan ama farageliyaan hawlgalka Internet Explorer. Tani waxay noqon kartaa sababta aan u heli weynay bogga internetka wakhtigaas. Way dhici kartaa haddii aan dhawaan beddelnay qaabaynta ama haddii aan rakibnay antivirus cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Internet » Internet Explorer ma soo bandhigi karo bogga shabakadda: maxaa la sameeyaa?
Waxa ay tahay in qolkaaga jiifku noqdo qol gamer ah